Ngaba i-17 ye-Apple TV 4 ihlaziywa ngomfanekiso omtsha | IPhone iindaba
Ngaba i-17 ye-Apple TV 4 ihlaziywa ngomfanekiso omtsha kunye nokusebenza okungcono
Kude kube kutshanje, Kodi yayibizwa ngokuba yi-XBMC. Ndisazi malunga nobukho bayo ixesha elide, kodwa bendingazi ukuba ndingayisebenzisa njani kwaye ndiye ndayeka ukuyikhupha. Kuba bendimazi, wayehlala enomfanekiso ofanayo, ulusu oludumileyo, umxholo okanye ulusu Ukuzolisa ukuba, nangona ibonelela ngokusebenza kakuhle kunye nonxibelelwano olunomdla, kufuneka sivume ukuba ibisele iphelelwe lixesha. Kodwa bekungoku kude kube ngoku, kuba bekhuphe ezi zikhumba zimbini ziwutshintshe ngokupheleleyo umfanekiso wazo wangcono.
Ngakolunye uhlangothi, namhlanje baye baqalisa inguqulelo entsha (esesesigaba se-Alpha) kwisizukulwana sesine se-Apple TV. Le nguqulo intsha ibandakanya izikhumba ezibini ezitsha ezibiziweyo Ichweba Ngohlobo lwayo ngokubanzi kunye Ukulala kuhlobo lwayo lwezixhobo zokuchukumisa, ezinje nge-iOS. Zombini izikhumba okanye imixholo ziyafana, kodwa kunjalo u-Estouchy unamaqhosha abonakalayo ukuququzelela ukucofa. Kodwa lumka, ndiyakulumkisa ukuba ungawubeki loo mbandela kwisixhobo esingachukumisi, kuba ndivavanye kwi-Apple TV 4 ukuze ndikwazi ukuthetha ngayo kwaye andikhange ndikwazi ukufikelela kuseto kwakhona, Ndinyanzele ukuba ndiyisuse kwaye ndiyifake kwakhona.
Imixholo emitsha yeRhafu iya kutshintsha yonke into
Njengoko ubona kwimifanekiso, iEstuary inomtsalane ngakumbi kuneConfluence. Ukunyaniseka, ukuba kudala sisebenzisa umxholo, kufanelekile ukuba siqhele entsha, kodwa ndicinga ukuba iya kufaneleka, kwaye kakhulu. Ngalo mfanekiso mtsha, i-Kodi izakusuka ekubeni ne-interface ecingayo ngakumbi ukuya kwidesktop kwaye ibe nento eza kujongeka ilungile nakwisiphi na isixhobo, nokuba yidesktop, iselfowuni, i-Smart TV okanye ibhokisi yokusetha ephezulu.
Ngaba ukuhlangana kwesikhumba
Kodwa iindaba ezibandakanyiweyo kule ntlawulo intsha ye-Kodi ye-Apple TV 17 ayisiyomifanekiso kuphela. Njengamaxesha onke, ukulungiswa kwe-bug kukongezwa kwaye ukuphucula ukusebenza, le yokugqibela iyeyona ibonakalayo. Ngoku kubonakala ngathi iyasebenza njengaso nasiphi na esinye isicelo ebesinokwamkelwa kwiVenkile yeVenkile ye-TV, hayi njengangaphambili ukuba besisoloko sinengqondo yokuba sizifakele ngokwethu ngendlela engekho mthethweni.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba uyifaka njani i-Kodi kwisizukulwana sakho sesine i-Apple TV, kuya kufuneka undwendwele Inqaku ukuba ugxa wam uLuis Padilla ubhale, naye wabhala indlela yokufaka ii-add-ons Kwirhafu yeATV4. Unokuzikhuphelela iphakheji ye-.deb yenguqulo entsha kwi LAPHA.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ngaba i-17 ye-Apple TV 4 ihlaziywa ngomfanekiso omtsha kunye nokusebenza okungcono
UMariano B sitsho
Ngaba ikhona indlela yokuyihlaziya ngaphandle kokuyifaka kwasekuqaleni? Enkosi!
Phendula uMariano B
Molo, Mariano B. Ngokunyanisekileyo ndinamathandabuzo am. Kwimeko yam, ndiye ndaneengxaki kuba andinakusayina iphakheji (ngenxa yesatifikethi esiphelelwe lixesha). Njengoko ndiqhele kakhulu kwaye sele ndiyazi indlela endifuna ukuyithatha, xa ndijamelene nengxaki encinci, ndenza yonke into ukusuka ekuqaleni.
Kodwa ndiza kukuxelela ukuba xa ndinengxaki yokutshintsha ulusu, ndiyibuyisile i -ipa .yayifaka phezu kwam ngaphandle kokuchukumisa nantoni na, kangangokuba ulusu alukatshintshi kwaye yiyo lonto Kwafuneka ndiqale kwakhona kwi-0. Ndiyakuxelela kuba uzama ukwenza yonke le nkqubo ngaphandle kokuhoya into yokuba sele unayo i-Kodi efakiweyo. Ukuba sinethamsanqa kwaye andiphazami, iya kuyifaka kuwe ngokungathi iyahlaziya. Ingxaki kwimeko yakho kukuba (rhoqo ukuba andiphazami) kuya kufuneka ulungiselele izikhumba ezintsha ngesandla (ukusuka kuseto lwembonakalo).
Ngaba unokuqinisekisa ukuba iyakusebenzela njengoko benditshilo? Konke okugqibelele.
Enkosi kakhulu ngempendulo yakho Pablo! Ndiza kuzama ukufaka i -ipa ngendlela endenze ngayo okokuqala. Ndiyathemba ukuba ndinethamsanqa kwaye iApple TV iyithatha njengombuyekezo kuhlobo esele ndilufakile Into enomdla kukuba i-Kodi inguqulelo ihlaziywa ngendlela efanayo nezongezo ezihlaziywa ngalo lonke ixesha umntu engena kwisicelo. Kodwa ndiyabona ukuba ngelishwa akunjalo. Xa ndifaka ingxelo entsha, ndiza kukwazisa ukuba ihambe njani. Enkosi kwaye Malunga!
Pablo olungileyo. Siphuculwa phi isatifikethi xa siphelelwa lixesha? Kuba ndicinga ukuba kwenzeka into efanayo kum, umntu osayinayo akasifumani isatifikethi sam seapile ukuze akwazi ukusayina i-tax kwakhona Ndiyenzile kwakudala, kwaye ngoku akukho ndlela yokuba isatifikethi sam sivele kwesi sicelo ... Ndiyabulisa
Molo, Jb. Ndicinga ukuba iyafana. Uyayicacisa apha: https://dantheman827.github.io/ios-app-signer/troubleshooting/#tab-bar
Kuya kufuneka uvule isitshixo sakho, ubonise izatifikethi ezifihliweyo, ucime ezo zisithi, ukhuphele ezo zikule webhusayithi kwaye uzivule. Emva koko cima iakhawunti yakho yeXcode kwaye uyibuyisele. Nje ukuba yenziwe, ungasayina kwakhona.
UMariano B. sitsho
Luphi ikhonkco lokukhuphela i-Kodi deb kuhlobo lwayo lwamva nje? Andiyifumani kwiphepha elisemthethweni leApple TV 4 ...
Phendula uMariano B.
Molo, Mariano B.: Wongeze ikhonkco.
Enkosi kakhulu Pablo! Umbuliso omkhulu!
Ndiyabulisa ndiyathemba ukuba ungandinceda ndinengxaki nangayiphi na indlela endinokuyifaka ngayo kuhlobo lwam lwe-apile tv4 17 Ndicacisa umsayini we-App ye-iOS ethumela le mpazamo ilandelayo… Impazamo yokufumana ifayile ye-deb… kwaye akukho ndlela yakwenza i-ipa. ngoku zama ukukhuphela i-ipa kwiphepha le-ipastore kwaye uligqithise ngotyikityo lweapp njengoko ndenzile ngaphambili kwaye akukho nto iyimpazamo efanayo ngempazamo ye-ifunbox ayindazisi ukuba yintoni kwaye into engaqhelekanga kukuba iinguqulelo ezidlulileyo zezokuqala eziphumele iapile tv 4 ukuba bayandisebenzela ndiyahamba ndinenkqayi hahaha ndikhangela isisombululo kwaye akhonto. Njengedatha ndikwinguqulelo 9.2 beta ye-tvOS andazi ukuba seso sizathu nangona ndiyithandabuza. kodwa ndiyathemba ukuba kukho umntu owaziyo into kunye nezimvo zokuphuma kule «enkosi kwangaphambili».
Umsayini we-app akaphoswa yi-ipa, yityala
Ukuba umntakwethu ndiyayazi loo nto kodwa ayenziwanga nge-deb okanye nge-ipa iyasebenza kwaye yenzeke kum ukuba ndikhuphele ipa kwi-ipastore, ndiyigqithisile kwi-appigner kwaye yiyo lonto, ndishiyekile nedatha yam yonjiniyela kuba ipa ukuba ndiyikhuphele i-xcode ayinakundivumela ukuba ndiyifake uyayiqonda? Yile ndlela yenzeke ngayo kodwa kwiinguqulelo ezintsha kungenjalo ipastore ipa okanye nge-deb nantoni na.
Ndifuna ukubukela umabonakude kwirhafu kwi-Apple tv4, ngaba kunokwenzeka kule nguqulo ye-alpha ngaphambili? Bona i-imagenio, okanye amajelo ohlobo lwe-TV enje nge-fox, tnt, paramount, njl.
Ndine apple tv 4 kwaye ikwi kodi ndizama ukuyivula kwaye indixelela ukuba i-tax ayifumaneki, yeyiphi?
Ngaba i-17 i-alpha ifake i-iPad kwaye andizukufumana (irhafu ayifumaneki).
IValdomero Mero sitsho
Ndafaka i-tax, provenance, mame kunye ne-tvosbrowser kwi-Apple tv4 kwaye isebenza kakuhle. Kodwa namhlanje xa ndivula enye yazo ithi "kodi ayifumaneki", "mame ayifumaneki" ... Kwaye ezinye ziyafana. Ngaba kunokwenzeka ukuba baphelelwe lixesha? Naziphi na izimvo? Ndiceba ukuzicima kwaye ndiphinde ndifake i-Xcode kunye neMac abaya kundivumela yona. Ukuba uyazi ukuba ungayenza njani ngokusisigxina ngaphandle kokuyeka ukusebenza emva kwexesha elithile, ndingavuya ngokukhanya okuncinci ngalo mbandela. Enkosi
Phendula uValdomero Mero
Molo, Valdomero. Ndilinde ukuzama indlela eyiyo yokwenza, kodwa izatifikethi ziphelelwa lixesha.
Ndayibuyisela kwakhona iMAME kunye neProvenance kwaye yandisebenzela, kodwa NDIYAKHOLELWA ukuba inokudibanisa neXcode kwaye iphinde isihlaziye isatifikethi. Ewe, inokuhlala iveki. Njengoko benditshilo, ngomhla we-13 ndiza kwenza olunye uvavanyo, kodwa ngokuqinisekileyo andizukukwazi ukuyipapasha kungekudala kuba ngalo mhla i-WWDC iqala.
Molo Pablo, igama lam ndinguFabel, ndingathanda ukuba undincede ukusukela eCanada ngamanye amaxesha qho kwiiveki ezi-2 oku kusenzeka kum ndine-apple tv 4 isizukulwane ndisikhetha emntwini kwaye undibeka i-tax kodwa ngamanye amaxesha uyandibhoda kwaye akandivumeli ndiyisebenzise, ​​uvula ilahlekileyo evaliweyo khange yenzeke amaxesha ama-5 ngoku kwaye into endiyenzayo ndiyithumela kwi-chabal eyihlukanisayo kwaye iyithumele kum kodwa ndisebenzise imali eninzi ukuhambisa kunokuba ndikuxelele , ungandinceda, ndingavuya, imibuliso
Molo, Fabel. Ndiyaxolisa ukukuxelela ukuba iApple itshintshe ixesha lesitifiketi esenziwe ngeakhawunti yonjiniyela yasimahla. Ibe kwiinyanga ezintathu kuye kwiveki. Ngoku kuya kufuneka uyenze veki nganye, ngenxa yoko ayifanele, ndiyakuxelela ukuba ndineApple TV 4 kunye nokubanakho ukuyenza veki nganye ngekhompyuter yam.
Ukuthengiswa kwegolide yeApple Watch akuvumelekanga eSpain
IPodcast 7x02: Usale kakuhle kwi-3,5 mm jack?